Luzon, agwaetiti kasị ukwuu na Philippines | Akụkọ Njem
Luzon, agwaetiti kasị ukwuu na Philippines
Mariela Carril | | Philippines, Asia njem
Luzon bụ agwaetiti kacha buru ibu ma buruo ibu na Philippines ọ dịkwa n’ime elu 15 nke nnukwu agwaetiti dị n ’ụwa. Na Philippines nwere ndị bi na 100 nde mmadụ na 48 nde ha bụ ndị a. Ọ bụ isi obodo, Manila.
Ọ nwere ọnụnọ dị oke mkpa na akụkọ ntolite Philippines na ọtụtụ ndị dị ike awakpowo ya kemgbe ụwa. N'ime ndị Europe ndị mbụ bụ ndị Portuguese. Na map nke oge colonial ọ pụtara na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na na njedebe ya, ndị Spain ga-achịkwa agwaetiti ahụ, na-emeri alaeze ndị nwere mmetụta na ya. Taa, Luzon bu uzo nke uwa nke omenaala nke bu Philippines.
1 Luzon, agwaetiti ahụ
2 Gbọ njem na Luzon
3 Ihe ị ga-ahụ na Luzon
Luzon, agwaetiti ahụ
Nwere a elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 110 puku kilomita kilomita, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke na ọdịdị akụkụ anọ ya n'agbanyeghị na ọdụ na-agbaba na ndịda ọwụwa anyanwụ na-akpụ peninsula. Iche echiche banyere Luzon bu iche echiche South Luzon, Central Luzon, North Luzon na mpaghara obodo isi obodo.
Agwaetiti nwere akụkụ dị larịị, oke ohia paini, dị iche iche ugwu ugwu (nke kachasị mkpa bụ Sierra Madre, lagoons na mmiri ozuzo ohia n'akụkụ ugwu. Ugwu kachasị elu dị ihe dị ka puku mita atọ n'ịdị elu ma si ebe ahụ na-asọ ọtụtụ osimiri.
Osimiri kachasị ukwuu bụ Osimiri Bay Ma ọ bụghị naanị ya kachasị ukwuu n'àgwàetiti ahụ na mba ahụ kamakwa na niile nke Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N’aka nke ọzọ, ọdọ mmiri pere mpe bụ Taal, ọdọ mmiri Caldera na-agbọpụ ọkụ nke ihe e chere na ọ bụ ugwu na-agbọpụ ọkụ kasị ukwuu n’agwaetiti ahụ n’oge ahụ kpụrụ. N'ikpeazụ, ala Bicol Peninsula bụ ugwu dị warara dị warara ugwu mgbawa, coves, bays na gulfs.
Gburugburu Luzon nwekwara ọnụ ọgụgụ mara mma nke agwaetiti ndị mara mma, gụnyere Palawan, Masbate na agwaetiti Mindoro, ọmụmaatụ. Ọ bụ n'ezie agwaetiti buru ibu buru ibu nke mere na ị ga-eji nlezianya chee echiche banyere ihe anyị ga-amata na ndị na-agaghị.
Gbọ njem na Luzon
Agwaetiti nwere ụgbọelu mba anọ Ma dị ka isi obodo bụ ebe obibi, ha na-arụsi ọrụ ike ọdụ ụgbọelu. Ihe kachasị mkpa bụ Ninoy Aquino International Airport ma ị ga-erurịrị ya na ọgba aghara na-arụ ọrụ nke nta.
Movegagharị n’agwaetiti ahụ enwere ọtụtụ nhọrọ, si mgbazinye ụgbọ ala na tagzi, multitaxis na tricycle, ezigbo maka n'okporo ámá ndị dị warara na obere ụzọ. Na jeepney Ha bụ ndị a ma ama ma nwee ụgbọ ala ọtụtụ mmadụ maka ego ewepụghị dị ọnụ ala. Ha na-eme obere oge na ogologo ma ọnụego a kara aka bụ nke kilomita atọ izizi iji mụbaa site na otu kilomita site na ebe ahụ. Otu na-aga n'ihi multitaxi, na-jikwaa na ofu udu.
Na Manila nwekwara a Metro na ihe banyere ụgbọ oloko e nwere naanị otu usoro ụgbọ okporo ígwè na-agafe ugwu nke agwaetiti ahụ dị ka Calamba, Bicol ma ọ bụ Baguio. Ọ bụ ezigbo ụgbọ oloko, nke nwere ntụ oyi na njem dị n'etiti Manila na Naga, naanị inye ihe atụ, na-ewe 14 awa na tiketi anaghị efu euro 9. Enwere ụgbọ ala? Ee, enwere bọs nwere ikuku na enweghi ikuku ikuku tiketi nke abụọ dị oke ọnụ. E nwekwara ụgbọ mmiri si n'otu agwaetiti gaa n'otu agwaetiti na ndị ahịa na-adabere n'ebe ndị dị anya. Gbọ mmiri dị atọ:
Benches: ndị a bụ ụgbọ mmiri ọdịnala, nwere moto, ha dị ọnụ ala ma na-agakarị obere njem. Enwekwara moto, ma a na-ejikarị ha aga ịkụ azụ.
Ferries: ha nwere ntụsara ahụ na ezigbo nhọrọ iji si Luzon gaa agwaetiti ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na enwere njem oge niile n'etiti agwaetiti ndị bụ isi
Hovercraft: ha bụ ụgbọ mmiri ndị ahụ na-aga n'ihu na matraasi ikuku. Ndị a bụ ndị si n'ụgbọ mmiri Super Cat.
Ihe ị ga-ahụ na Luzon
El ochie obodo Manila ọ bụ ịma mma nke colonial ị nwere ike iji ụkwụ mee nchọpụta. Ọ dị n’akụkụ ụsọ mmiri ma ihe dị ka nde mmadụ 1.6 bi na ya, yabụ ọ dị ka ọ bụ obodo nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ jikọtara ọnụ na ụwa, ya bụ, enwere ọtụtụ mmadụ na square kilomita ọ bụla.
Ga-agarịrị na Rizal Park, Katidral, Obí Achịbishọp, Obí Gọvanọ, Obí nke Santa Powerna, Fort Santiago na ogige nke Santa Lucía. Enweghị ụkọ ọmarịcha ọmarịcha, ebe ịzụ ahịa, ụlọ ahịa na ahịa.
Banyere ọdịbendị enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ dị ka National Museum, Museum nke Filipino People, Museum of Natural History, Museum of Contemporary Art, Museum of Sciences and Arts na Museum nke History of Ideas.nke Akụkọ banyere ọchịchị na ụfọdụ ndị ọzọ na okpukpe ngosi ihe mgbe ochie n'etiti ndị kasị akpali.
Gagharị na obodo, obodo ochie, dị mfe n'ihi na ụgbọ mmiri dị iche iche na-agbagharị, ụgbọ ịnyịnya na-adọkpụ malite n'oge colonial ma ọ bụ naanị ndị njem nleta na-eji ya eme ihe taa. Ozugbo mpụga Manila enwere akụkụ ndị ọzọ nke Luzon Island nke so n'etiti ndị ọkacha mmasị.
E nwere ugwu mgbawa abụọ, ndị Pinatubo ugwu mgbawa na Taal. Nke mbụ bụ ugwu mgbawa na-arụ ọrụ nke nọ jụụ ogologo oge ruo mgbe ọ gbawara na 1991 ma bibie ya nke ukwuu, dịka Krakatoa nke 1883. Nke abụọ na-arụ ọrụ mgbe niile ma dekọọ ọgbaghara 33, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'àgwàetiti Ọdọ Taal nke mmiri ya dị. jupụta na caldera ahụ nke e guzobere ọtụtụ nde afọ gara aga.
N'ebe ugwu nke Luzon enwere mara mma teres ịkụ ubi na agbụrụ ndị obodo ahụ kwesịrị ịmara n'ihi na ọ bụ ụmụ amaala amaala na asụsụ Filipino. Na ala ndị mara mma nke ukwuu izu ike ma nwee obi ụtọ bụ ndị na-enye ihe Subic Bay na Obodo Anyanwu. Osimiri ahụ dị naanị 100 kilomita site na Manila ma jiri ya nọrọ ọdụ nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri US.
N'okpuru mmiri ya enwere ọtụtụ ụgbọ elu na ụgbọ mmiri ndị agha dara na narị afọ nke iri abụọ, ọkachasị ndị Japan na ndị America. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga ije ma ọ bụ ịga ije i nwere ike ịnwale ala na okporo ụzọ Sagada, lee ihe mara mma Simigang Cave na ndị a ma ama Igbe ozu ndị e kowere n’elu ugwu.
Ọ bụrụ na-amasị gị oké osimiri na- osimiri Subic, ha nwere otutu amara ma na pagudpud o nwere ájá ọcha dị ka ntụ ọka e gwere nke ọma. Otu ihe ị hụrụ n'ime Agwaetiti Magalawa. N'ikpeazụ, iji banye n'ime omimi n'oge gara aga nke agwaetiti ahụ, ị ​​nwere ike ịga leta obodo ndị nwere ọtụtụ ọmarịcha Europe: Vigan tinyere okporo ámá ndị a sụrụ asụ, ụlọ ndị Spen na ụdị ya dị iche iche.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụbọchị ole na ole na Luzan Island bụ ụzọ kachasị mma iji mara ma nweta Philippines.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Luzon, agwaetiti kasị ukwuu na Philippines
Ga Stockholm na oyi
Ebe kachasị dị ọnụ ala n'ụwa bụ Asia